Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / Thatha iipompu zekhitshi / WOWOW Gooseneck Ikhompiyutha Yekhitshi Ngokutsala Isitshizi
Gooseneck ekhitshini itepisi ngokudonsa isitshizi
Njengoko umgangatho we-WOWOW's gooseneck kitchen faucet ungenakuphikiswa, umlinganiselo wexabiso lomgangatho ophezulu wefowuni yekhitshi yeyona nto uya kuyifumana kwimarike. Kungenxa yokuba i-WOWOW isebenzisa ubuchule bokuvelisa obutsha kunye neenkqubo ezizenzekelayo, singanikezela ngale faoset yekhitshi ngexabiso elifikelelekayo. Impompo yasekhitshini ihlala iyinto yokugqibela ethengelwa ikhitshi elitsha. Ke ngoko iifompe zasekhitshini zihlala kukungena kokuvala uhlahlo-lwabiwo mali lwekhitshi luphela, apho imida yoluhlahlo-lwabiwo mali ihlala isondela okanye ifikelelwe. Ke kulungile ukuba uyazi ukuba usengafumana itompu yekhitshi ekumgangatho ophezulu kuhlahlo-lwabiwo mali olunomda.
Uyilo olwahlukileyo lwesitayile
Umlomo odibeneyo wokutsala
Idibanisa isitayile kunye nokusebenza okuphezulu
Yenziwe ngezinto zobhedu ezikumgangatho ophezulu
I-SKU: 2311701 iindidi: Thatha iipompu zekhitshi, IFaucets yasekhitshini tags: Uqhekeze uNickel, Yehlisa, spray